Foods – Healthy Life Journal
သင်စားချင်စိတ် ပြင်းပြနေသော အစားအစာမှတစ်ဆင့် သိနိုင်သည့် သင့်ကိုယ်တွင်းကျန်းမာရေး
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အစာတစ်ခုခုကို စားချင်စိတ် ပြင်းပြနေတာဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က တစ်ခုခုမှားယွင်းနေကြောင်း ပြသနေတာပါ။ သင်က အချိုသရေစာကို စားချင်စိတ် ပြင်းပြနေသလား၊ ချောကလက်စားချင်နေသလား ဒါကိုကြည့်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်လိုဓာတ်တွေ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အချိုစာကို စားချင်စိတ်...
ရောဂါဝေဒနာများ မဖြစ်စေရန် စူပါအစာ ခြောက်မျိုး
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဖြည့်စွက်ဆေးတွေထက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစာတွေကနေ အာဟာရဓာတ်တွေ ရယူသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အာဟာရဓာတ်ကို ရရှိဖို့ဆိုရင် ရောင်စုံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားမှသာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ ရောဂါကာကွယ်နိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို ရရှိမှာဖြစ်လို့ပါ။ (၁) ခရမ်းချဉ်သီး...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အခုတလော ကိုလက်စထရော တက်တဲ့သူတွေ များနေပါတယ်။ အစားအသောက်ကြောင့်လား။ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေထဲမှာ ကိုလက်စထ ရောပါဝင်မှုများတတ်ပါသလဲ။ ပြောပြပေးပါခင်ဗျား။ ဦးခင်မောင်၊ ကျောက်မြောင်း။ A. ကိုလက်စထရောကတော့ ဟင်းအနှစ်တွေမှာ ပါတာများပါတယ်။ ကြက်ဥ၊...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ အရင်ဆုံး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကို ရှင်းပြပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပထမသုံးလပတ်ကာလထဲက အလုံးလေးစဖြစ်မယ်။ အချင်းဖြစ်မယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးထွားလာမယ်။ ဒုတိယသုံးလပတ်ကာလဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၁၃ ပတ်ကနေ ၂၇ ပတ်အတွင်းမှာ သန္ဓေသားက အကောင်အထည်ပေါ်လာပါပြီ။...
ဇွန် “ကိုယ်စားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်တယ်”ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ သင်စားတဲ့အစာတွေကြောင့် ပိန်တာ၊ ၀တာ စတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်သလို နုပျိုတာ၊ အိုမင်းတာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစားအသောက်က ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ရင် အသားအရေရဲ့ အိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို တိုးစေတာကြောင့် ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အချိုစာများ သကြားများများစားတဲ့အခါ သကြားမော်လီကျူးတွေက ပရိုတင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီး...
အစားထိုး စားသင့်သည့် အစာများ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) ဗီတာမင်ဘီနှင့် အီးပါဝင်မှုများသည့် အစာများ ဗီတာမင်ဘီနဲ့ ဗီတာမင်အီးက ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆံပင်အတွက် မရှိမဖြစ် ဗီတာမင်တွေပါ။ ဆံပင်သားကို သန်စွမ်းလှပစေရုံသာမက အဆီပိုထွက်ရှိမှုကို ထိန်းညှိပေးကာ ဆံပင်တွေကို ပိုသန်စွမ်း ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ ပဲသီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးတွေလို...
အစားအသောက်များထဲတွင် ထည့်လေ့ရှိသော ခွင့်မပြုဆိုးဆေးအန္တရာယ်
Q. အစားအသောက်တွေမှာ ထည့်လေ့ရှိတဲ့ ဆိုးဆေးတွေအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. တချို့အစားအသောက်တွေထဲမှာ ဆိုးဆေးတွေ ထည့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုးဆေးမှာ သဘာဝအားဖြင့် ဖြစ်တဲ့ ဆိုးဆေး(Natural Dye) နဲ့ သီးသန့်ဆိုးဆေးအတု...
ဗီတာမင် B1 များစွာပါဝင်သည့် အစားအစာ ၁၀မျိုး
ဇွန် ဗီတာမင် B1 ဟာ ဆဲလ်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ထိန်းပေးတာနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပေးတာကြောင့် မရှိမဖြစ် အာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ ဗီတာမင် B1 ချို့တဲ့တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ နာ့ဗ်ကြောနဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ် အပါအ၀င် တစ်ကိုယ်လုံးကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။...
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အားကောင်းစေမည့် အစာများ
ကိုထက် ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး ကက်သရင်းဇီတာဂျုံးဟာ အသက် ၆၀ကျော်တဲ့ မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကို ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ကညွတ်၊ ထောပတ်သီး၊ တိရစ္ဆာန်အသည်း စတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အားကောင်းစေတဲ့ အစားအစာတွေကို ပါဝင်အောင် ထည့်သွင်းလေ့ရှိပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားပေးတာကြောင့် ချစ်စိတ်ကို အားကောင်းအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။...